Website-yada caanka ah ee loogu talagalay soo saarista xogta - Talo-siinta ugu yar
Webka xoqitaanka, oo loo yaqaano goosashada webka, waa farsamo loo isticmaalo in laga soo saaro xogta shabakadaha kala duwan. Qalabaynta shabakadaha shabakadaha waxay galaan bogagga shabakada iyagoo isticmaalaya Qodobka Xawilaadda Qodobka Qodobbada iyo xoqidda macluumaadka waxtar leh sida ku qoran tilmaamahaaga. Xaaladaha ama ujeedooyinka webka ayaa loo isticmaalaa ujeedadaas. Waxay marka hore ururiyaan xogta oo ay ku kaydiyaan xogta dhexe. Tallaabada xigta waa in la xoqo macluumaadka macnaha leh ee isticmaalayaasha, iyo faylasha dhoofinta ee qaababka isticmaalaha. Cilmi-baadheyaasha iyo suuq-galku waxay isticmaalaan waraaqaha webka si ay u soo saaraan xogta ay u baahan yihiin. Qaar ka mid ah bogagga caanka ah ee ugu caansan ee xogta soo saara ayaa hoos ku xusan:
1. Website-yada socdaalka:
Dalxiiska dalxiiska ayaa soo batay bilihii la soo dhaafay, haddana waa mid ka mid ah ganacsiyada ugu caansan uguna faa'iideysanaya netka. Waxaad si sahlan u abuuri kartaa bogga safarka waxayna bixiyaan duulimaadyo maxalli ah oo caalami ah, huteelada iyo adeegyada kala wareejinta macaamiishaada. Si kastaba ha noqotee, waa inaad hubisaa in heshiisyada aad soo bandhigtay ay yihiin kuwo calaamad u ah. Ujeedadaas awgeed, waxaa laga yaabaa inaad u baahatid in aad ka soo qaadatid xogta laga helo calaamadaha caanka ah ee caanka ah sida Iskuulka iyo Trivago. Xogta warshadaha ayaa la jaray waqtiyo badan, aadna si sahlan u kobcin kartid boggaga internetka ee ku salaysan xogta.
2. Guddiga Shaqada:
Guddida shaqada waxay fududeyneysaa inaan helno boosas ku habboon oo ku haboon filashadayada iyo taariikhda waxbarasho. Marka shirkad shaqo u dirto, musharrixiinta laga yaabo inay soo gudbiyaan dib-u-dejintooda iyo profiles. Nidaamkan waa la fuliyaa ilaa inta shirkadda su'aashu ay hesho musharaxa saxda ah. Waxa ugu muhiimsan ee guddiga shaqadu u baahan yahay inay bixiyaan waa miisaanka shaqada ee bandhigyada. Sidaa darteed, waxaad la xiriiri kartaa dad badan oo dad ah waxayna kortaa ganacsigaaga. Isticmaal Kimono Labs ama Import. iyo inaad ka qaadato xogta laga helo guddiyo shaqo oo kala duwan oo ay dhisaan barmaamijka dalbashada baahida loo qabo. Marka xogta la soo saaro, waa inaad u soo qaadataa dariiqaaga adag. Sidoo kale, hubso in xogtu ay sax tahay oo ay ku jiraan barashada kooban ee shaqaale raadiyaha iyo bixiyaha shaqada.
3. Website-yada wararka:
Maqaalada maqaalka ayaa muhiim ah haddii aan rabno inaan isha ku hayno dhacdooyinka hada. Waa maxay qaabka ugu wanaagsan ee lagu heli karo xogta? Waxaad isticmaali kartaa calaamadda webka ama waraaqaha waraaqda ah. io) si aad uhesho macluumaad faa'iido leh oo ka socda waraaqo kala duwan. CNN, BBC, iyo warbaahin kale oo warbaahin ah ayaa lagu beegsan karaa importka. io iyo Kimono Labs. Marka maadada la soo saaro, waxaad ku daabici kartaa boggaaga gaarka ah iyo sidaan u horumarin lahaa darajooyinka mashiinka raadinta. Tusaale ahaan, haddii aad rabto maqaalada wararka ku saabsan Donald Trump, waxaad ka heli doontaa macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan Google News. Mid ka mid ah faa'iidooyinka asaasiga ah ee kaydinta bogagga wararka waa inaad adigu sameyn kartid qalab mana ubaahnid xirfadaha barnaamijka oo dhan. Wixii bilow ah, waa fursad dahabi ah si ay u koraan ganacsigooda oo ay xoqdo xogta tayo sare leh Source .